Visitor from US is reading Nothing happens, really!
Visitor from US is reading अमेरिकाको भारतीय रेष्टुराँमा भाँडा माझेर नेपाल सप्रिन्छ त
Posted on 08-17-20 2:46 PM Reply [Subscribe]
यूएस को स्कूल छोडेको नि दशक हुन थाल्यो। स्टेम फिल्डमा ग्रयाड स्कूलको लागी यूएस आउने धेरै नेपालीलाई फाइनान्सीयली धेरै स्ट्रगल नहोला, तर वी मिस आउट अन टु मेनी थिंग्स । सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा पर्छ ..."नट गेटिङ लेड"। यूनिवर्सिटी ग्रांटमा आउने प्रायजसो इंजीनियरिंग, साइंस, म्याथ मेजर नेपाली बोकाहरूको सेम समस्या, न गर्लफ्रेंड, न हूक-अप्स, न वन नाइट स्ट्याण्ड। कारण, जिरो कन्फिडेंस। १ साईज सानो वा ठूलो एरोपोस्टल वा अमेरिकन ईगल टि सर्ट, एरिजोनाको स्ट्रेट कट जिन्स, एडिडास वा हाई-टेक को हाईकिंग जुत्ता, मिड अगस्ट देखि मिड मे सम्म अखण्ड कुखुरा भुत्ले नर्थफेस अनि हरर गरम मसला, कन्फिडेंस आओस नि कसरी?
फेरी स्त्री जातिको मामलामा, पूर्वका रेग्मी देखी पश्चिमका पनेरू, उत्तरका राई देखी दक्षिणका गुप्ता सम्मको स्ट्याण्डर्ड चाहिं ९ भन्दा तल सेटल हूने च्याया...यान्स छैन। आहिले आएर आफ्नो जिसि/सिटिजन बुडिलाई हेरेर आफ्नो भ्यानिटी ईन्स्यानिटीलाई सराप्दै होलान।
ग्रयाड स्कूलमा फिमेल भनेको एक दुर्लभ द्रृष्य। एक्का दुक्का नेपाली या त डबल बुक्ड (प्लेया) की प्रूडस(जो हात समाते भुंडी बोक्छन भन्ने सोच राख्छन), बाँकी चाइनीज, इंडियन, बांग्लादेशी वा ईस्टर्न यूरोपियन (किप अन ड्रीमिङ्ग )।
यस्तै यस्तै गरि दिन बित्दै थिए, वीकडेजमा कोर्सवर्क, रिसर्च एडवाइजरको गुलामी, वीकेंड मोस्टली मेगा शेयरमा हल प्रिन्टका साथ मनाइन्थ्यो नत्र अखिल नेपाल लिङ्ग महोत्सव वीथ मोमो, कूर्स, कोही जे डी, जिम बिम, भोड्का क्रानबेरी, अनि नेपालको विकास। नाइट लाइफ, क्लब, बार जाने आंट कसैले गर्दैन थे, म्युचुअल जजमेंटको डरले।
समरमा प्राय जसोअण्डर ग्रयाड ईस्टर्नसिप गर्न वा घण्टा हान्न ओशन सिटी जान्थे, एउटी अण्डर ग्रयाड स्टुडेंट थिई, जुनियर ईयरको, ग्रयाड स्कूलको ल्याबमा काम गर्थि, लोकल फास्ट फूडमा घण्टा नि हान्थी। समरमा साथी धेरै नभाको भएर ग्रयाडहरू संग ह्याङ्गआउट गर्थी। २२-२३ वर्षकी, पटिट, हल्का ट्यान भएको फेस, गाला हल्का सुकेको, नाकमा वाँया पट्टी नोजरिंग, कपाल खैरो खैरो । काममा जाँदा खाकी प्यान्ट, फास्टफूडको पोलो लगाउँथी, बेसवल क्यापको पछाडिबाट पोनि टेल निकालेको हुन्थ्यो। लुगा लगाउँदा सधैं एक्दम मिलाएर लाउनी। परफेक्ट फिट हुने लुगा मात्र लाउंथी। लुगा मिलेपछी ज्यान पनि राम्रो देखिने। कामको युनिफर्म लगाउँदा नी ठिक्क मिलेका बुब्स र बिहाइण्ड ले सेक्सी देखिन्थी। काम वाहिरचै समरमा प्राय जसो सोर्ट्स् र ट्याकं टपमा देखिन्थी। गोलीगांठो माथि सानो रोजको ट्याटु पनी हानेकी थिइ।
यता उता जमघट हुँदा क्याजुयल कुरा हुन्थे। उस्को लगंटाईम अन-अगेन अफ-अगेन बोईफ्रेण्ड अर्कै स्टेटमा थियो। हामी प्रिटिमच फ्रेण्ड जोन्ड। अण्डरग्रयाडहरू ग्रयाड भन्दा धेरैनै पपकल्चल्चर्स सिकिसकेकाले, ग्यादरिँग्समा हाम्रा सोम हरू पुरै जजमेंटल भइदिने उसलाई देखेर। अनी उस्को एक्सेन्ट दार इङ्ग्लिसलाई उडाइदिने। सधैं प्रोफेसर, रिसर्च, कलिउड, भ्रष्टाचारको कुराले कहिले काहीं ईरिटेट हुन्थी। कतिले वक्र दृष्टी लगाको थाहा पाएर नै होला २-४ जना अली सेन्सिबल बुढाहरूलाई भाईजोण्ड गर्या थी, सायद डिफेंस मेकानिजम् होला।
मलाई नेपालको र रिसर्चको कुरा गर्न दिक्क लाग्थ्यो । यो जमातमा हलिउड वलिउडका कुरा गरे झण्डै देश द्रोही भइन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै, यस्ता पार्टीमा उ संग धेरै कुरा हुन्थ्यो। अहिले जस्तो सबको हातमा स्मार्ट फोन हुन्न थियो । जे गफ हानेनी तु फ्याक्ट चेक नहुने हुनाले म जेनरल नलेजको कुरा गर्थें , अनि अलि अलि पपकल्चल्चर्स को कुरा। फ्ल्रट गर्ने आंट थिएन । फ्रेण्ड बाट भाईजोण्ड हुने पक्का थियो।
काम पर्यो भने कहिलेकाहीं टेक्स्ट गर्थी, राईड माग्थी, रुममेटको बिचिंङ गर्न वा बोईफ्रेण्ड संग झगडा परे दारू हान्न आउंथी। हामी घरमा पार्टी गर्थ्यैं बेला बखतमा, उ आउंथी।
एकदिन केही ओकेजनमा हाम्रो घरमा पार्टी थियो।उ अर्कै संग राईड लिएर आको थी। अली लस्ट देखिन्थी, ड्रेसअपमा चाहिँ नो कम्प्रमाइज। ईमपेकेबल गेटअप, पर्की टिट्स, टाइट बट्।
सबैले मिलेर मोमो बनाइयो, बियर टन्न थियो सबजना मोमो बियर खाँदै गफ गाफ हुँदै थियो, फेरी उही घिसापिटा टपिक आयो। रूममेटहरू पुरै गुड मुडमा गफ हाँक्दै थिए। सोचें भोली आफैंले घर सफा गर्नुपर्छ आजै अलिअलि गर्छु भनेर नयाँ बियर टिपेर किचन तिर लागें। ट्र्यास ब्याग फेरेर, बाहिर फालेर आउँछु भनेर ब्याक डोर खोल्न हात उठाउनलाको, उसले बाहिर बाट ढोका खोली। मुसुक्क हाँसेर अर्को हातले इसारा गर्दै बाहिर आउन भनि, "आफ्टर यु"। म नि हाँसेर, "थ्याँङ्स, के गरिरा" भनेर सोधें? "बाहिर अरूसंग कुरा गरिराथें, दाइहरू स्मोक गर्न थाल्नुभो अनि भित्र आको, यु नो आई डोन्ट लाइक स्मोक "। मैले, "ओके" भनेर बाहिर निस्कें, अनि खुट्टाले ढोका अडाएर, जाउ, भने। भित्र आउँदा, उ मेरो बियर लिएर, किचनमै कुर्सीमा बसेकी रैछ। "त्यो मेरो थियो" भनेर बियर तिर देखाएँ। उसले "ओ आई एम सरी" भनी। "कसले खोलेर छोडेछ नया बियर भनेर मैले खाइदिएँ" भनेर बोटल म तिर बढाई। मैलै "इट्स ओके" भनेर फ्रिजबाट नया बोटल निकालें। अनि भाँडाहरू सिंकमा हाल्न थालें। "पार्टी छोडेर के सरसफाइ गरिरा" भनेर सोधी। मैले उल्टै "तिमी चैं पार्टी छेडेर किन किचनमा ?" भनेर सोधें। "दिपकराज गिरी र प्रोफेसर रविन्स एउटै हुन्, मरो लागी। डोन्ट नो अ शिट अबाउट देम, स्टिल किप हायरिंग द नेम्स एभ्री डे" । मैले "एग्ज्याक्टली" भने। दुवै हाँस्यौ अनि उ मलाई हेल्प गर्न लागी। १५-२० मिनेटमा धेरै काम सक्या जस्तो लाग्यो । यतिकैमा बाहिरबाट अरू केटाहरू आए अनि हामी संगै लिभिङ्ग एरिया तिर लाग्यौं।
म त्याबाट निस्किए पछी अर्को कलेजका ३-४ जना केटाकेटीहरु आका रैछन्, तीनीहरु सँग चैं अलिकती कुरा मिल्ने रैछ, हलिवुड,म्युजिक अनि ई. पि.एल बाहेक अरु स्पोर्ट्सको नि कुरा हुन थल्यो । पि. यच. डि. का बुडाहरु छिटै बुडी च्यपेर घर चली हाले ।अनी राती १२ जस्तो बजी सक्या थियो १५-१६ जना घरमै थियौं ।
एउटा रूमी झाल्लु भएर पसआउट भो, लगेर रूममा थन्काइयो । घरमा जम्मा ३ बेडरूम थियो, ४ जनाले शेएर गरेका थियों । अर्को रूममेटको वाईफ आको भएर १ वीक देखी म लिभिङ एरिया को फुटोनमा सुती राको थिएँ ।
अर्को कलेज को केटी र उस्ले राईड शेएर गरेर आको केटिहरु हाम्रो अर्को रूममटे का साथी रैछन सो केटिहरुलाई एउटा रूम भयो । २ जना केटीहरू अर्को रूममा सुत्न गए। ऊ एकछिनमा जान्छु भनेर बसी ।
ऊ म र अरू दुई जना गफ गर्दै थियौं, ऊसले २-३ वटा बियर सकिसकेको थिई, म ५-६ नम्बरमा थिऐं। अर्को केटा पनि गफ गर्दा गर्दै घुर्न थालेछ, उसको साथि चुरोट तान्न जान्छु भनेर निस्कियो। हामी सोफा बाट फुटोनमा सर्यैं । फुटोन झ्याल नजिक थियो, अलि चिसो भएछ। मैले मेरो कम्फर्टर फुटोन मुनीबाट निकालेर, उसलाई दिएँ उसले थ्याँङ्स भनेर अगाडि बाट आफ्नो हात खुट्टा छोपी।
बाहिर बाट त्यो अर्को ब्रो आयो, अनि उ नि सुत्न नजिकै को घरमा गयो।
अब उ र मात्र फुटोन मा बसेर गफ गर्दै थियैं, "आज किन अफ देखिको" भनेर सोधें। २-३ दिन देखि बोईफ्रेण्ड संग किच किच परिराको कुरा बताई। समरमा बोईफ्रेण्ड संग भेट नहोला जस्तो छ भनेर भन्दै थिइ। रिलेशनशिप यस्तै हो, भने । कुनै बेलाको आफ्नो फेल्ड किस्सा याद गरें। म गुड मुडमा थिएं, लास्ट वान भनेर अर्को बियर खोल्न ला थिंए, वान फर मि टु, भनी, अनि कुलरबाट दुईटा बियर निकलेर खोलें। एकछिन गनथन गरेपछी सोफाको कुशन ल्याएर फुटोनको तल पल्टिन थालें। उसले काँ तल सुत्न लाको इट्स योर बेड, भनी। मैले इट्स ओके भने। उसले फुटोन माथिनै सुत्न कर गरी। मैले फुटोन ढल्काएर बेड बनाएं। "पिक योर साइड", भने। उ केही नबोली कुना तिर गई।मैले फुटोन मुनीबाट तकिया निकालेर उसलाई दिएं। म कुशन लिएर छेउमा पल्टें। उसले लाइट अफ गर्न भनी, मैले हलवे को लाइट अन गरें, लिभिङ्ग एरिया को अफ गरें। बेडमा सुतेपछि उसले कम्फर्टरले अलिकति मेरो खुट्ट छोपिदिइ, मैले थ्याँङ्स भने। ५ मिनेट जति पछि उ म तिर सरी। उसको शरीरले मेरो शरीर स्पर्श गरिरा थियो। मन उथलपुथल हुन थाल्यो। दारूको असार पनि होला, मनमा संकोच चैं धेरै थिएन। विस्तारै उसले हात समाती। मलाई इशारा मिल्यो। उ तिर कोल्टे फर्केर कम्मर समातेर आफूतिर तानें। उसले अफ्नो औँलाहरू बिचमा मेरो औँलाहरू राखेर हातलाई पेटीमाथि राखि अनि म तिर अझै ढेप्पिदैं आई। उसको टिसर्ट हल्का माथि सारेर हात भित्र हालें, अनि कान पछाडि नाकले छोएं। उसको कान र पेट उत्तिकै तातो थियो। बिस्तारै हात माथि सार्दै ब्रा को अण्डर वायर (under wire) वरपर औँला नचाउन थालें। उसले हात च्याप्प समातेर सिधै आफ्नो बुब माथि राखी। बुब धेरै ठूलो चाहीं हैन, प्याडेड ब्रा ले गरदा ठिक्कको देख्या रैछ। बुब टाइट थियो। सफ्ट ब्रा माथिबाट बायाँ बुब माड्दै कान पछाडि घाँटीमा किस गरें। उसो ब्रिदिग्ङ हेभी हुन थाल्यो। बिस्तारै हात ब्रा भित्र हालें अनि निप्पल चलाउन थालें। उ झस्केको जस्तो गरी, मैले हात निकालेर उसको पाखुरा समातें, पाखुराभरी कांडां उम्रेछ। फेरी मेरो हात समातेर दायां बुब माथि राखी। मैले दाँया निप्पल चलाउन थालें। २-३ मिनेट पछि उ म तिर फर्की । मैले चिउँडो समातेर ओठमा हल्का किस गरें। उ झन् म तिर आई। मैले हात पछाडि लागेर ब्रा को हुक खोली दिएँ। अनि पछाडी ढाड मुसार्दै उसको तल्लो ओठमा डिप किस गरें। उसले रेसिप्रोकेट गरी, मलाई नि किस गर्न थाली। मैलै फ्रेन्च किस गर्न थालें। हाम्रो मेकआउट सेसन लामै चल्यो। उसले मेरो टाउको पछाडिको कपाल समातेर आफूतिर तानेर किस गर्दै थिई, म उसको तिघ्राको विचमा आफ्नो घुँडा राखेर चाक समातेर आफूतिर च्याप्न थालें। मलाई थाहा थियो आज यो भन्दा अघि बढ्न गार्हो छ। म संग कन्डम थिएन, रिस्क लिने कुरै थिएन। एकछिन उसले आफ्नो क्रच मेरो घुँडामा रगडी। म चैं ब्लु बल्ड भएं। उ आँखा नखोलीकिन कोल्टे फेरी। म उसको चाकमा लिङ्ग रगड्दै, बुब्स र निप्पल खेलाउदै निदाएछु। विहान म उ भन्दा चाँडै उठेर रेस्टरूम गएर आएर फुटोनको तल पल्टें। ...क्रमस ...
Posted on 08-17-20 2:57 PM [Snapshot: 3] Reply [Subscribe]
Liked it. It reminded my old time.
Last edited: 17-Aug-20 02:58 PM